Sawir..Diyaaradda Mustaqbalka Baalasha Ayey Ku Xambaari Doontaa Rakaabka! | Xaqiiqonews
Sawir..Diyaaradda Mustaqbalka Baalasha Ayey Ku Xambaari Doontaa Rakaabka!
Tan iyo Muddo Diyaaradaha ayaa u sameysan qaab isku nooc ah, hase yeeshee Horumarka ayaa u socda in uu badalo qaabka diyaaradaha Waqti dhaw.
Waxaa hadda socdo Farsamada diyaarada u eg qaab ahaan Xarafka “V” sida ka muuqata sawirka hoose.
Qaabkani Cusub oo ay qorshahiisa waddo shirkadda “KLM” Airline ee laga leeyahay Waddanka Holland ayaa waxaa uu diyaaradda ka dhigayaa mid qaadata shidaal ka yar marka loo barbardhigo qaababkii hore.
Sidoo Kale Aqriso:Diyaaradda Ugu Weyn Aduunka..Ogow Qiimaheed Quraafaadka!
Rakaabka waxa ay ku xambaari doontaa baalasha taasina waa sababta diyaaradani ay u cuneyso shidaal yar.
Diyaaradda qaabka “V” wax badan kama dhinna si ay u noqoto diyaarad la arki karo oo dhulka saaran, hase yeeshee in ay noqoto diyaarad ka qeyb qaadata safarada ma ahan suuragal ilaa laga gaaro sanadka 2040.
Waxaa Xusid Mudan in diyaaradda noocani ah ay wax badan isku soo dhaweysay Haamaha shidaalka diyaaradda iyo kuraasta Rakaabka, taasina waa sababta 20-ka sano ee soo socoto mashruuca diyaaradani uu noqon doono mid taagan si loo helo aaminaad ku dhaw 100%